CC Sharmaarke oo si kulul uga hadlay doodda ka taagan magacaabis la’aanta Wa’iisul Wasaaraha - Awdinle Online
CC Sharmaarke oo si kulul uga hadlay doodda ka taagan magacaabis la’aanta Wa’iisul Wasaaraha
Ra’iisul WasaarihiI hore ee Soomaaliya Saenator Cumar C/rashiid Sharmarke ayaa ka hadlay marxalada kala-guurka siyaasadeed ee uu dalka ku jiro iyo sida loo maareyn karo xilligaan.
Isaga oo ka qeyb-galayay Barnaamij ka baxayay mid kamid ah Tv-yada ka howlgalla Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in Madaxweyne farmaajo hadii uu donayo in uu wax qabto uu qaban karay saddexdii sano iyo barkii ay wada joogeen Kheyre.
Sidoo kale waxaa uu ka hadlay soo Magacaabis la’aanta Madaxweyne farmaajo ee Ra’iisul Wasaaraha,waxaana uu sheegay in ay dhaawac ku tahay heshiisyada la gaari doono fulintooda.
Ra’iisul WasaarihiI hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Sharmarke kana mid ah Xildhibaannada Aqalka Sare ayaa kamid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleAskari ka tirsan Ciidamada Somaliland oo toogasho lagu dilay
Next articleKoox hubeysan oo Shan Macalin ku dishay Shabeellaha Dhexe